Ọdịnihu nke mmekọrịta ọhaneze B The Ọdịnihu nke ahia | Martech Zone
Enwere m ohere ịbịa n'oge na-adịbeghị anya ExactTarget Njikọ 2012, na n’etiti ọtụtụ mkparịta ụka ụka, enwere m mmasị na ya nke isiokwu ya Social 2020: Gini ga-abụ nke anyị? Onye nhazi nke Jeff Rohrs, VP Marketing Research & Education na ExactTarget, gụnyere Margaret Francis, VP nke Social na ExactTarget, David Berkowitz kwuru, VP nke Emerging Media na 360i, Stephen Tarleton, Director nke Global Channel & SMB Marketing Bazaarvoice, na Sam Decker, onye isi na Onye guzobere Ihe dị mkpa.
Lọ ọrụ ahụ nwere ụfọdụ echiche na-akpali iche echiche, na ụfọdụ amụma, ma ọ bụ usoro. Dịka onye na-ere ahịa, enwere m echiche nke m banyere etu ọdịnihu ga - adị, na enwere akara ntụ na nso ngwụcha nke a, mana paragraf ole na ole sochirinụ nwere ike inye aka nye echiche ụfọdụ.
Anyị ndị na-ere ahịa mgbe ụfọdụ na-echefu na ndị nna anyị na-ere ahịa bụ ndị na-eri anụ. Ọ dịghị ihe ha chọrọ karịa iwepụ ndị asọmpi nke ndị ahịa ha n'ọma ahịa. A sị na ha nwere ike iji ube, mma agha na ube, chụ nta ha, ha gaara enwe.
Mgbe anyị nwere ọganihu site na akụkọ ntolite nke ịzụ ahịa, anyị niile ghọtara nwayọ nwayọ emere, na-eduga n'echiche nke ozi ziri ezi, onye ziri ezi, oge kwesịrị ekwesị. Ruo n'ókè ahụ, mgbe ụfọdụ anyị nwere ike ịkọwapụta ọrụ anyị site n'ikwu na anyị na-emere ndị na-azụ ahịa amara site na ịnye ha ọrụ bara uru. A sị ka e kwuwe, anyị nwere ọrụ anyị ga-arụ.
Ma ka anyị chee ya ihu; ihe mgbaru ọsọ na 2,000 BC ga- nyere ndị ahịa anyị aka inweta ọchịchị. Ma ya ka di.
Ọsọ ọsọ rue afọ nke ihe niile na-elekọta mmadụ. Teknụzụ mmekọrịta ọha jidere ụlọ ọrụ America na crosshairs. Na mberede, onye na-eri ibe ya bịara nwetụrụ nsogbu. Anyị mereghachi omume na eziokwu ọhụrụ a, anyị mere ya nke ukwuu maka ọtụtụ akụkụ. Kedu ụlọ ọrụ ole taa na-azaghachi nke ọma maka ajụjụ ndị ezigara na ha Twitter?
Emehiela banyere ya. Ọ bụrụ na mmekọrịta mmadụ na ụwa abịaghị, ụwa azụmaahịa agaraghị agbanwe omume ha. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ na-achọsi ike ka ndị ahịa ha lekwasị anya, ha agaraghị emepụta ụdị nke ọwa ha? Anyị ka na-ebi n'ọgụ a ma ọ bụ ụwa ụgbọ elu, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-agbasi mbọ ike ijikwa eziokwu ọhụrụ a, ịhazi ya.
Ozugbo ọtụtụ n'ime ndị ahịa obodo ahụ jidere mmekọrịta mmadụ na ibe ya, a na-emeso ya dị ka ọnyà, nwa atụrụ e kegidere ya na osisi, na-eji ọdụm na-enweghị atụ rata ọnyà ahụ. Mana enwere otu ozo n'etiti agburu anyi, ndi huru oha mmadu dika agbụrụ ohuru di omimi, nke di omimi nke gbagoro n'ala anyi. Ee, ha dị iche, mana ha na-eweta onyinye nke imekọ ihe ọnụ, nke ige ntị, nke obodo, na nkekọrịta.
Anyị ka na-achụ nta, mana anyị na-eme ya dịka otu ezinụlọ. Anyị na-ewere naanị ihe anyị chọrọ, anyị na-ekekọrịta akụkọ gburugburu ọkụ. Ọ bụ aghụghọ, mana mgbanwe miri emi banyere otu anyị si ere ahịa na-abịaru ọrụ anyị. Ọ pụtaghị na anyị ga-akwụsị mkpọsa anyị, metrik anyị, ma ọ bụ ihe kpatara anyị ịbụ ndị na-ere ahịa. Ọ pụtara na anyị na agbụrụ ka ukwuu na-achụ nta, anyị na-agwakwa mkpebi anyị site n'echiche dị iche.
Yabụ ebe a ka anyị dị, dịka ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ n'ime eziokwu ọhụrụ a, mana anyị ka na-akpa ike oge ụfọdụ dị ka a ga-asị na anyị ka nọ n'ụwa ochie. Kedu agwa na Egwuregwu Agụụ ahịa ị bụ? Ugbu a laghachi na ajụjụ ndị otu ahụ jụrụ, yana ndụmọdụ m banyere otu esi ezute ụwa ọdịnihu amaghị nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Otu okwu ahịrị m bụ:
Kwụsị iche banyere teknụzụ!
Ntaneti bu nke ndi mmadu, ma dika ihe omuma na-adiputa uzo obula, o na esi ike karie inweta nlebara anya. Ndị na-ere mmekọrịta mmadụ na ọdịnihu ga-eweta ọgba aghara teknụzụ ga-azaghachi na nke a, ihe a na-amaghị ama na-agbadakwa kedu ka ọ ga-esi kpaghasị? Ndị ahịa ọhụụ ọhụụ ghọtara na ọ na-esiri ndị otu ike ịkọ ọdịnihu nke teknụzụ mmekọrịta. Kama nke ahụ, ha kwesịrị ilekwasị anya n'ihe ga-anọgide na-adị oke egwu nsogbu ọ bụla na-abịa, ya bụ, omume ndị a ga-akwanyere ùgwù n'agbanyeghị agbanyeghị mgbanwe teknụzụ.
Tags: 360ibazaavoicenjikọ 2012david berkowitzkpachaara anyadirecttarget njikọọdịnihu nke ahịaọdịnihu nke mmadụọdịnihu nke mgbasa ozi mmekọrịtajeffrey rohresmargaret francismkpasamker ihestephen tarleton
Ọkt 22, 2012 na 6:34 PM
Nnukwu ozi, ọ na-egosi na ire ahịa ahụ, n'ọdịnihu ga-adabere kpamkpam na mgbasa ozi mmekọrịta dịka ọganihu na mgbasa ozi mmekọrịta na-ewere ọnọdụ ngwa ngwa.